Dzimba dzinochengetedza: mapurani, hunhu uye zvakanakira | Green Renewables
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo munharaunda yezvivakwa kudzikisa kukanganisa kwenzvimbo uye mhedzisiro yeshanduko yemamiriro ekunze ndeaya dzimba dzakasimba. Idzi ndidzo dzimba dzine zvinhu zvakasikwa uye izvo zvinoshandisa masystem anodzokororwa uye kupihwa nesimba rakachena. Uye zvakare, iyi mhando yeimba inobatsira mararamiro anoremekedzeka pamwe nharaunda, izvo zvinoshandura kudzikisira tsoka yezvisikwa.
Muchikamu chino isu tinotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive nezvehunhu uye kuvakwa kwemabhokisi akasimba.
2 Zviitiko zvekuvaka dzimba dzakasimba
3 Simba rekugadzirisa dzimba dzakasimba
4 Mhando zhinji dzinoshandiswa
4.1 Bamboo iri kubuda
4.2 Kuwa imba
Kuti isu titaure nezve dzimba dzakachengetedza zvakadaro, zvinodikanwa kuti zvinhu zvakaomarara zvinoshandiswa pakuvaka kwavo. Uye zvakare, inofanirwa kukwanisa kugadzira simba rayo uye inokwanisa kushandisa yayo zviwanikwa. Imwe yeakanyanya hunhu maererano nesimba rakasimba kushandiswa kwemajenareta ezuva uye maparacas. Nemagetsi ezuva iwe unogona kushandisa simba kubva kuzuva. Chimwe chikamu chedzimba dzakachengetedza ndiko kushandiswazve kwemvura inonaya. Magetsi anokwanisa zvakare kuunganidzwa ayo anokwanisa kuchengetedza simba kubva kumhepo.
Nekudaro, hazvisi izvo zvese zvakanaka. Mitengo inosimudzira ine matambudziko akati wandei. Zvichida inonyanya kukosha mutengo wezvinhu. Uye ndeyekuti mutengo uyu unodhura zvakanyanya kupfuura echinyakare zvinhu. Kunyangwe zvakadaro, mutengo haufanire kugara wakakwira nguva dzose. Kune vamwe vavaki vezvigadzirwa uye vagadziri vakakwanisa kudzoreredza zvinhu kuitira kuti mari isanyanya kukwira. Uye zvakare, inofanirwa zvakare kutariswa kuti dzimba dzisingagumi dzinotanga kuchengetedza mari yekupa kubva chirevo ichi ichienzaniswa nemusha wechivanhu. Izvi zviri munguva yakareba kuponesa kukuru zvese zvehupfumi uye nharaunda.
Zviitiko zvekuvaka dzimba dzakasimba
Tinofanira kutanga tavimbisa nhevedzano yezvinhu zvekutanga kuti tione izvo zvinodikanwa uye zvinodikanwa zvinodiwa kuvaka dzimba dzakatsiga. Iyo inonyanya kukurudzirwa ichave inotevera:
Gadzirira bhajeti inoenderana nerudzi rwemba iwe yaunoda kuvaka.
Funga nezve kutarisisa kweimba kuti igone kuchinjika kuderera kwemutengo wesimba.
Kushanda nesimba kwakakosha pakuvaka rudzi urwu rweimba. Izvo zvakakoshawo kuti ushandise kushandiswa kwezvinhu zvinowedzerwazve.
Izvo zvekuvakisa uye kushandiswa zvinofanirwa kunge zviri ecological zvachose.
Mvura inofanira kuchengetedzwa zvine hungwaru. Ndokunge, yakawanda yacho inogona kuunganidzwa kubva kune iyo inouya kuburikidza nemvura.
Chinhu chakanyanya kukosha pane zvese ndechekuti, pamwe, inobatsira nemari.
Mune imba inoenderera, zvakakosha kuti uwane nyaradzo mune zvese mweya nemhepo kutonhodza. Iwe unogona kuzadzikisa mamiriro emwenje akasununguka usingashandise akawanda ekushandisa uye nekuwana yakanakisa nhanho yekudzivirira inzwi. Kunyangwe iwo ese mapoinzi akurukurwa, hupfumi hwacho hwakanyanya. Pano yakanaka yekuvaka uye dhizaini manejimendi inopinda mukutamba kuitira kuti mutengo usakwire zvakanyanya. Uye zvakare, zvinonakidza kuti dhizaini yeimba yacho inokwezva.
Kuti dzimba dzigadzike kuve dzinokwezva kune veruzhinji, mutengo wemutengo wakakosha kwazvo. Mutengi anoziva kuti vachadzorera mari mukati memamwe makore, kuti vakwanise kutakura yakakwira mari yekuvaka. Inofanirwa kuratidza huwandu hwemagetsi uye emabhiri emvura ayo achachengetedzwa nekufamba kwenguva.
Mhuri dzinogadzikana dzinoda zviwanikwa uye zvishandiswezve zviwanikwa. Kana zvichidhura uye zvichinetsa kuwana zvekushandisa zvichidikanwa kuti mhuri ifungidzirwe senge inochengetedza nharaunda, saka zvinoreva tsika iyi hazvigoneke.
Simba rekugadzirisa dzimba dzakasimba
Ndokusaka imba isingagumi ichifanirwa kuverenga simba rayo uye kugovera uye kuvaka mutengo kusevha pamusoro pehupenyu hwayo hwese hunobatsira. Sezvo zvekutanga zvekuvakisa zvakawanikwa, imba yacho inogona kuve nemakore mazhinji ehupenyu hunobatsira uye kugadzirisa kusvikira yashandiswa zvakare. Pamusoro pezvese izvi, zvakakosha kuti unakirwe neimba inoenderera maererano nemaumbirwo ayo.
Chinokosha chekuchengetedza dzimba dzakasimba mutemo wevatatu R wekusimudzira: kudzikisira, kuisazve uye kushandisa zvekare. Zviwanikwa zvekushandisa uye kugona kwetekinoroji kunofanirwa kuwedzerwa.
Izvo hazvisi zvemasolar panel chete kana mvura yekunaya yekukohwa zvigadzirwa zvemumba. Inokurudzirwa kushandisa mhepo kuomesa mbatya pane kushandisa yekudonha yakaoma, Inokurudzirwa kuti utarise iyo yakajeka nguva uye usashandise yakawandisa. Kune vamwe varidzi vedzimba dzegirinhi vanoshandisa mapindu avo kuve nebindu rezvakaberekwa uye vanobatsira mukuremekedza pasi. Nekuti mararamiro evaridzi vedzimba akasvibira akakosha kwazvo kuchengetedza nharaunda.
Mhando zhinji dzinoshandiswa
Bamboo iri kubuda
H&P, yeVietnamese yekuvaka yakasimba, yakavaka imba isingagumi yekutengesera varombo. Iyo dhizaini inoyeuchidza iyo yemiti mune yakatenderedza nharaunda, saka chinzvimbo pane stilts chakanyanya kwazvo. Dhizaini yekugadzira ndeyekudzivirira mafashama anosvika pamamita 1,5.
Bamboo mumaruva anofukidza nzvimbo inosvika makumi mana emamita emamita uye yakavakwa nezvinhu zvakawanikwa munzvimbo iyi zvakaita semishenjere, fibreboard nemashizha ekokonati, saka kuvakwa kwayo kuri nyore uye kuri nyore, uye kunogona kushandiswawo nehupfumi nevanhu vanotambura.
Fougeron masitudiyo ekuvaka akagadzira uye akavaka imba inosimbisa kuti iwe unogona kuve nehupenyu hwakazara hwakakwana. Iyo ine façade yemhangura iyo inopa mweya wegungwa wekutonhorera kwechisikigo uye kurongeka kwayo kunopa dziviriro yakakwana pamoto. Chimwe chezvinhu zvakanaka zveimba ino mawindo ayo anoshanda nesimba. Ivo vane yakasarudzika dhizaini iyo inovabvumidza ivo kumutsa echisikwo kufefetedza mweya pavanenge vakavhurika. Zvimwe zvezvinhu zvawo kusarudzika kwekuvhurika kwemusuwo. Izvi zvinokubatsira iwe kudzikisa kudiwa kwemhepo inodzora. Pakupedzisira, imba ine mvura yekushandisa patsva inoita kuti igone zvakakwana.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvedzimba dzakagadzikana uye hunhu hwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Dzimba dzakasimba